Bulchitoonni Teenya Dhugumatti Eenyuun Tajaajiluu-Nu Moo Fedhii Dhuunfaa Isaaniitii? | Untold Stories of the Silenced
15th May 2016 By Daniel G. Areri
Yeroo arbi lamaan wal-lolu, kan jalqaba miidhamu margaa (hookaa); margaafi bineensota xixiqqoo iddoo arbi irratti wal-lolu san jiraniidha. Bifuma wal-fakkaatuun, humnoonni jajjaboon akka arbaa lamaanii fedhii dhunfaa isaaniitiif jedhanii yeroo wal-lolan, Kan jalqaba miidhaan irra gahu ummata nagaati.
Yeroo tokko tokko harkoonni humnaamessi(humneessi), gara galma fedhii isaanii seenuuf maqaa ‘dimookiraasii’ jedhutti fayyadamanii mirgoota ilmaan namaa ittiin dhiitan. Sababa tarkaanfiiwwaan humnoonni jajjabni kunneen maqaa ‘dimookiraasiifi bulchiinsaa gaarii’ jedhuun fudhataniin, namoonni kumootaan laakka’aman yoo du’an, miliyoononni hedduun ammoo qe’eefi qabeenya isaanii dhiisanii biyyaa baqataniiru. Bakka dhiittaan mirgoota ilmaan namaa jirutti, namoonni lubbuu isaanii baraaruuf jecha iddoo balaan jiru dhiisanii baqatan; akkasuma biyyi isaaniille ni miidhamti. Erga Ameerikaan bara 2003 keessaatti biyya Iraaqii weerarteen duuba, ba’aan guddaaniifii hojiin yaaddeessaan addunyaa kanaaf uumamuudhaan, biyyoonni biroo baqattoota akkamitti akka simatanirratti qabsaa’a turan. Biyyoonni Awuroppaalle fedhii dantaa isaaniitiif jecha, mootummoota abbootii irree gargaaruudhaan wajjin michoomanii hojjatan. Yeroo mootummoonni abbootii irree kunneen gargaarsa Awuroppaanonni kennaniifitti fayyadamanii ummata nagaa balaa itti buusanii biyyaa baasanitti, baqattoota gara Awuroppaatti baqatan akka itti simatan wallaalanii waliin rakkachaa jiran.
Qawweetti fayyadamanii nagaa buusuun waliin dhahaadha; qawwee waliin hiriyaafi fira ta’uu jechuun, maatiifi hiriyaa dhiittaa mirgoota ilmaan namaa ta’uu jechuudha.
Biyyoonni guddatan tokkoofi tokko qawweefi meeshaa waraanaa oomishuudhaan biyyoota abbootii irree akka daa’imaatti yaadaniitti gurguratan. Biyyoonni abbootii irree akka daa’imaatti yaadan kunneen ibiddaan taphachaa, gareewwaan sabaafi sab-lammoota hedduu akka qawweetti dhimma bahaniif afeerraa dhiheessaafii jiran. Haa ta’uu malee, nageenyi ‘sammuu qawwee’ waliin firoomina hin qabu. Namoonni tokko tokko qawweetti fayyadamuun dimookiraasiifi bulchiinsa gaarii deebifachuuf dubbatan. Garuu wanti waakkatamuun irra hin jiraanne, afaan qawwee keessa dimookiraasiin hin jiru, dhiittaa mirga ilmaan namootaa male. Yeroo doktoroonni akka ilma namaa ittiin fayyisanu badadanii baratanitti, loltoonni ammoo akka ilmaan namaa itti ajjeesanu baratan. Mee nuuti maaliif ogeessa nageenyaatiifi fayyinnaa hedduu horachuu dadhabnee, ogeeyyii du’aa hedduu qabaannee? Akka ofii kiyyaa itti amanutti, biyya ‘sammuu qawweetiin’ bulchanu keessatti, mirgoonni ilmaan namaa hiika dhugaa hin qabanu. Qawweetti fayyadamanii nagaa buusuun waliin dhahaadha; qawwee waliin hiriyaafi fira ta’uu jechuun, maatiifi hiriyaa dhiittaa mirgoota ilmaan namaa ta’uu jechuudha.
Mootummoonni gurgurdaafi xixiqqaanille, haasawa isaanii guyyaa guyyaatiin dimookiraasii faarsan. Haa ta’uu malee, hundi isaaniituu dantaa dhuunfaa isaaniitiif gorora coccobsaa mirgoota ilmaan namaa dagachuudhaan ofittoo ta’aniiru. Yeroo walitti bu’iinsii dimookiraasiifi fedhii dhuunfaa jiddutti uumamu, meeqa keenyatu ija waa hubattuun ilaallee hubataa jirraa? Maaliif walcaalchisaafi haqa dhabiisa maasii (fichaa) keenyaa keessatti facaasnaa? Yeroo akkanatti, sanyii midhaanii haaloo facaasnu kanatti, maal haammachuuf deemnaa? Wayta biqiltuu jibbiinsaa sammuu sabootaa keessaatti dhaabaa jirru kanatiti, sanyii midhaanii akkamii galfachuuf deemnaa? Baqattoonni, kumaatamootaan Galaana Mediteraaniyaanii keessatti du’aa jiran. Qurxummiin ammoo reeffa isaanii soorataa jirti. Namoonni qurxummii qaban ammoo, qurxummii foon namaa nyaattu qabanii namootatti gurguran.Kanaafuu, ilmi namaa, ilma namaa nyaataa jira jechuudha. Leenci jaldeessa nyaata; jaldeessi ammoo kuruphee (buuddannee) nyaata. Bineensi waan qalbii hin qabneefuu wal-nyaatan jennaa, nuti ilmaan namaa maal ta’aa jirraa? Mee eessa jira namummaan?
Nuuti, ilmaan namaatiifi bineensillee, maatii uumamaa addunyaa tokkooti. Addunyaan tun, tapha siyaasaa farra mirgoota ilmaan namaatiifi dhimma dantaa dhuunfaa addunyaa galaafachaa jiru kana irratti xiyyeeffannoo itti kennuun keessa deebitee of ceephessuu qabdi. Akkuma mammaaksi Oromoo jedhu, “kan babaa gubbaa fudhadha jettee, kan bobaa gattee” jedhutti, waraanaafi aangoo isaanii dheerefachuu keessatti, hoggantoonni ummata biraa amantaa dhaban. Bulchitoonni ummata biraa amantaa dhabnaan kufaniiru jechuudha.
afaan oromodaniel g areriethiopiaethiopia human rightsethiopia press freedomhuman rights ethiopiasabina westerlunduntold storiesuntold stories ethiopiauntold stories of the silenced
Oromo Poet Caalaa Hayiluu Abaataa: "Don't Chase Me" The poem "Don't Chase Me" read by the author himself, Caalaa Hayiluu Abaataa. Caalaa was jailed and tortured in Maekelawi,...